Achawlaymyar - Page 1131 of 1136 - News and Media
သင့် ကို တန်ဖိုး ထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင် တဲ့ သင့်လက် တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ
May 31, 2020 by Achawlaymyar
ချစ် တယ်လို့ပြောတာကတယောက်ယောက်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခံစားချက်တွေဖော်ပြတာကတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး။တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီးတချို့ကအပြုအမူနဲ့ပြပါတယ်။သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဒေါသထွက်စရာစိတ်ပျက်စရာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။ BrightSideက သင်ချစ်ရတဲ့လူတွေ လုပ်ပြတဲ့ အပြုအမူတွေက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာ ပြောစရာမလိုအောင် သိဖို့ နည်း ၆ နည်းကို ဖော်ပြထားပါတယ် ..။ (၁) သင်ပြောတာတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလို နားထောင်တယ် သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ ပျော်စရာကော၊ ဝမ်းနည်းစရာကောကို နားထောင်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ် ဆိုရင်၊သူတို့က နားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုပါ တန်ဖိုးထားနေတယ်လို့ပြတာပါ။သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ဆက်ဆံရေးကို ပိုခိုင်မာပြီး ရိုးသားမှုရှိလာအောင် လုပ်နေတာပါ …။ (၂) သင့်ရဲ့ အချွဲအနွဲ့တွေကို ကြိုက်တယ် သင်ချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာ ချွဲနွဲ့ရတာလည်း ဆက်ဆံရေးတခုမှာ ပျော်စရာပါပဲ။ သင့်လက်တွဲဖော်က သင့်ကိုချွဲရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် သင်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ကို ပိုကောင်းစေချင်ပြီး တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။အဲဒါတင်မကပါဘူး။နဖူးကိုနမ်းခြင်းနဲ့ အနောက်ကသိုင်းဖက်ခြင်းတွေက စကားလုံးတွေမပါဘဲ သင်ကအရေးကြီးကြောင်းကို ပြနေတာပါ … Read more
ရာသီ လာချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုရှောင်ပြီး၊ ဘာတွေကိုတော့ စားပေးနိုင်သလဲ အမျိုးသမီးများရဲ့ အာဟာရလိုအပ်ချက်တွေဟာ ရာသီလာချိန်တစ်လျှောက်လုံး ပြောင်းလဲနေပြီးတော့ ဒါဟာ ဟော်မုန်းအတက်အကျဖြစ်ခြင်း အကြောင်းအရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သွေးဆင်းချိန်မှာ ပဓာနကျတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ ဗီတာမင်တွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အမျိုးသမီးများရဲ့ ရာသီချိန်မှာ အာဟာရမျှတစွာ စားသုံးပေးဖို့ကို အမြဲတိုက်တွန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီလာချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနှင့် မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့ကို တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက် တစ်ချို့သောအစားအစာများက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ရာသီချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို စားသင့်ပြီး၊ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမလဲဆိုတာကို အခုပဲပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ရာသီချိန်မှာ စားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာများ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ဓမ္မတာချိန်မှာ ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးသတ္တုဓာတ်ကတော့ သံဓာတ်ဖြစ်တာကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ပမာဏကို … Read more
ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေ ကိန္ဒ ၏ အ လှူတော်..ရင်ထဲ ထိတယ် ဗျာ.. မျက်ရည်ေ တွလည်ဝဲ ပါတယ်…
ဘုန်းဘုန်းကြီး အရှင်ဆေ ကိန္ဒ ၏ အ လှူတော်..ရင်ထဲ ထိတယ် ဗျာ.. မျက်ရည်ေ တွလည်ဝဲ ပါတယ်… ဘုန်း ဘုန်းကြီး အရှင်ဆေကိန္ဒ ၏ အလှူတော်..ရင်ထဲထိတယ်ဗျာ.. မျက်ရည်တွေလည်ဝဲ ပါတယ်…သူ့ ညီမ ကိုယ့်ညီမ..သူ့ သမီး ကိုယ့် သမီး …. ကိုယ်ဝန်ဆောင် တဲ့ အချိန် စိတ်အားငယ်တတ် ပါတယ်….. ဒီကြား ထဲ covid ကာလ ဖြတ်သန်းရတော့ ကိုယ်ချင်း စာကြည့်ပေါ့ကွာ တဲ့ ….. အများနဲ့နေ ရတော့ အနေ ၊အစား ဆင်းရဲ နိုင်တယ် မင်းသွားကြည့် ကွာ လိုတာ ငါလှူ မယ်လို့ မိန့်တော့ ကျွန်တော် ငဦး Q center ကိုသွားပြီး … Read more
‘သငျ့ခဈြသူ နှုတျခမျးတဈဝှိကျမှာ” မှဲ့” ရှိနလေား ရှိနတေယျဆိုရငျ ဖတျကွညျ့ပါ’
နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့”ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာအလွန်ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာအပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ်သဘောထားကတော့ အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါတယ်။ ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ။ သူများကိုကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာသုညဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေပါ။ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့သူတွေပါ။ နုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်”မှဲ့”ပါတဲ့သူဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ်။ စိတ်ကောက်လည်း ခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူရှိရင်တော့ ဟန်အမူပိုပြီး ဆက်ပြီးတော့ စိတ်ကောက်ဟန်ဆောင် နေတတ်ပါတယ်။ ချော့မယ့်သူ မရှိရင်တော့ သူ့အလိုလိုပျော့သွားရော။ ချစ်သူအပေါ်မှာလည်း ကလေးတစ်ယောက်လို ဆိုးနွဲ့ချင်ကြပါတယ်။ အချစ်လည်း အရမ်းကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်စိတ်ကြီးတော့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အပြစ်ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးနားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ မတင်မကျနဲ့ အမြဲသံသယ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အတိတ်တွေကိုတော့ … Read more
လယ်လုပ်ပြီး ဘွဲ့ရတဲ့ထိ ရှာကျွေးခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးကို ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ပေးနေတဲ့ မင်းသားနေယံ
နယေံဟာ ဗီဒီယိုရုပျရှငျမြားစှာ ရိုကျကူးခဲ့သူဖွဈပွီး ကရြာဇာတျရုပျမှာ ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတာကွောငျ့ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ မငျးသားတဈလကျပါ… မငျးသားနယေံဟာ သူ့ကို လယျလုပျပွီး ကြှေးမှေးလာတဲ့ မိဘနှဈပါးနဲ့ ပတျသကျပွီး လူမှုကှနျရကျမှာ ခုလို ပွောပွခဲ့ပါတယျ.. “သားသမီးတှကေို လယျယာလုပျ ခွံစိုကျပြိုးဈေးရောငျးပွီး ဘှဲ့ရတဲ့အထိ တကျနိုငျတာ အစှမျးကုနျ ကွိုးစားရှာဖှပွေုစုစောငျ့ရှောကျခဲ့တာ အရမျးပငျပနျးခဲ့တယျ.. ဒီခြိနျမှာ ဒီလောကျလေးပွုစုခှငျ့ရတာလေးကို ဘဝမှာအလိုခငျြဆုံးအရာပါ.. ကနျြတာတှေ အရမျးမမကျမောပါဘူး.. အိပျခနျးထဲတောငျသှားမအိပျတော့ဘူး ကလေးနှဈယောကျ တဈနတေ့ဈနပွေ့ောလိုကျတဲ့စကားတှေ ခုမှတှတေ့ာကနြတောပဲ နှဈယောကျသား.. ခုတော့ အိပျပြျောသှားကပြွီ ” ဆိုပွီးအဖအေမရေဲ့ ကွညျနူးစရာပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ မိဘကြေးဇူးကို သိတတျပွီး အကောငျးဆုံးကြေးဇူးဆပျနတေဲ့ မငျးသား နယေံအတှကျ ယခုထကျမကအောငျမွငျပါစလေို့ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော.. Writer ; Kwee (Jeeptoolay) Source ; Nay … Read more
သူ့အပေါ် ကိုယ်က တကယ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူကကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှ ကောင်းမလာဘူး ဆိုရင် …
May 30, 2020 by Achawlaymyar
⚘ဝဋ်ကြွေးတစ်ခုသာ ဖြစ်လာရင်⚘ ကိုယ်ကောင်းပေမယ့် သူမကောင်းတာ”ဝဋ်”ကြောင့်ပါ သူ့အပေါ် ကိုယ်က တကယ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ သူကကိုယ့်အပေါ် နည်းနည်းလေးမှ ကောင်းမလာဘူးဆိုရင် ကိုယ့်မှာဝဋ်ကြွေး ရှိနေပြီဆိုတာ သေချာပါတယ်။ သူ့ကို ကိုယ်က ဘာမှ အပြစ်လည်းမပြော ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အပြစ်တွေ ဘာမှလည်းမရှိဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုသူက အပြစ်ပဲ အမြဲပြောနေပြီဆိုရင်သေချာတယ် ကိုယ့်မှာ ဝဋ်ကြွေးရှိနေပြီဆိုတာ။ ကိုယ့်ကလည်း သူ့ကိုတစ်ခါမှ မမုန်းရပါဘဲ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ သူ့ဆီမှာ.. ကိုယ်အမုန်းခံနေရပြီဆိုရင် သေချာတယ်၊ ကိုယ့်မှာ အမှန်တကယ်ဝဋ်ကြွေးရှိနေပြီဆိုတာ။ ဝဋ်ကြွေးရှိရင် ကိုယ်မလုပ်ပေမယ့် ကိုယ်လုပ်တယ်လို့ အထင်ခံရတတ်တယ်။ ကိုယ်မပြောပေမယ့် ကိုယ်ပြောတယ်လို့ အထင်ခံရတတ်တယ်။ ကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါလည်း ကောင်းတယ်လို့တစ်ချို့လူတွေမမြင်ကြဘူး။ ဝဋ်ဆိုတာ ဆပ်မှကျေမယ်။ ဆုတောင်းနေရုံဖြင့် ဝဋ်ကုန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဝဋ်ကြွေးတွေကျေ ဖို့ သူမကောင်းပြောလည်း ကိုယ်ကသူ့ကိုမကောင်းပြန်မပြောနဲ့။ သူကကိုယ့်ကို အမုန်းပေးနေလည်း ကိုယ်ကအမုန်းပြန်မပေးနဲ့။ သူက … Read more
အောက်ပိုင်း သေသွားတဲ့ ချစ်သူကို ပြစ်မသွားပဲ သစ္စာရှိရှိ ဆက်ချစ်ကာ ပြုစုပေးနေတဲ့ လေးစားဖွယ် လူသားတဦး…
အာက်ပိုင်း သေသွားတဲ့ ချစ်သူကို ပြစ်မသွားပဲ သစ္စာရှိရှိ ဆက်ချစ်ကာ ပြုစုပေးနေတဲ့ လေးစားဖွယ် လူသားတဦး ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Chiang Mai မှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၃၁နှစ်အရွယ် Narawut Phongyen ဆိုသူ အမျိုးသားဟာ အသက် ၂၁နှစ်အရွယ် Patcharaphan Lenkham ကောင်မလေးနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာအွန်လိုင်းပေါ်ကတစ်ဆင့် ဆုံတွေ့ပြီး ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားပေမဲ့ ၇ လလောက်အထိ တစ်ယောက် ကို တစ်ယောက် မမြင်ဘူးကြပါဘူး။ အဲ့ဒီနောက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ နှစ်ယောက်သား အပြင်မှာ တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်က မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ချိန်းတွေ့မဲ့ ကာလ မရောက်ခင်မှာပဲ Patcharaphan ဟာ ကားမတော်တဆမှု တစ်ခုနဲ့ … Read more
ဇာတ်မင်းသမီး​လေးကိုပါးတွေ နားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ ပေးတာကြောင့် ဆိုပြီး LGBTမလေးကို မတရားတွေထိုးကြိတ်နေတဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
ဇာတ်မင်းသမီး​လေးကိုပါးတွေ နားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ ပေးတာကြောင့် ဆိုပြီး LGBTမလေးကို မတရားတွေထိုးကြိတ်နေတဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် May 30, 2020 AdminLeave A CommentOn ဇာတ်မင်းသမီး​လေးကိုပါးတွေ နားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ ပေးတာကြောင့် ဆိုပြီး LGBTမလေးကို မတရားတွေထိုးကြိတ်နေတဲ့ စွမ်းဇာနည်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ဇာတ်မင်းသမီးလေးကိုပါးတွေ နားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေ ပေးတာကြောင့် ဆိုပြီး LGBTမလေးကို မတရားတွေထိုးကြိတ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင် Vedio Fileအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် ဇာတ်မင်းသားစွမ်းဇာနည် မတရားထိုးကြိတ်နေတာဗျာ။ဟိုနေ့ကဇာတ်မင်းသမီးလေးကိုပါးတွေနားတွေရိုက်တဲ့ သတင်းဓာတ်ပုံတွေပေးတာသူဆိုပီး LGBTမလေးကိုမတရားတွေထိုးကြိတ်နေတာဗျာ…အဲသတင်းကသူပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး မင်းသမီးအကောင့်ကိုဝင်ကြည့်ရင်းနဲ့သိတာပါကွာ…ကိုယ်ကလည်း မဟုတ်တာလုပ်ထားသေး မဆိုင်တဲ့သူတွေကို ပတ်ရမ်းတာတော့များသွားပြီကွာ… Credit Vedio Amara News #Unicode ဇာတျမငျးသမီးလေးကိုပါးတှေ နားတှရေိုကျတဲ့ သတငျးဓာတျပုံတှေ ပေးတာကွောငျ့ ဆိုပွီး LGBTမလေးကို … Read more
ဆိုင်ကယ်မောင်းခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား
ဆိုင်ကယ်မောင်းခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နယ်မြို့တွေမှာ နေထိုင်သူတွေဟာ‌ ‌ဈေးဝယ်သွားတာဖြစ်စေ၊ အလုပ်သွားတာဖြစ်စေ၊ ဆိုင်ကယ်နဲ့သာ အသွားအလာလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကို အပျော်မောင်းနှင်ကာ သဘာဝရှုခင်းကို ခံစားတတ်တဲ့ခရီးသွားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတင်မကပါဘူး၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရနိုင်ပါသေးတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးတင်မကဘဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ ကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။ “Gym သွားဖို့ အချိန်မရှိရင် ဆိုင်ကယ်မောင်းပါ” လို့တောင် တင်စားတတ်ကြပါသေးတယ်။ (၁) ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေပါတယ် ဂီယာနဲ့ ကလက်ပါတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို မောင်းနှင်ဖို့ဆိုရင် ဦးနှောက်ရဲ့စဉ်းစားဉာဏ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဂီယာ (Gear)၊ ကလက် (Clutch) နဲ့ ဘရိတ် (Brake)တို့ကို လိုအပ်သလို ထိန်းညှိကာ မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ပါ။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ ဟန်ချက်ညီညီ … Read more
ညစဉ် ဝေလေးရဲ့ မျက်စဉ်း အကောင်းစားတကယ်အစွမ်းထက်တဲ့ နတ်မျက်စဉ်း စပယ် ပန်း၎.၅ .၆.ပွင့်ကိုရေးဆေး ပြီး မနက်ထဲက အဲလို ရေးသန့်သန့်လေးနဲ့ စိမ်ထားပါ။ ညရောက်တဲ့အခါကြရင် ပန်းပွင့်တွေ ဖယ်ပြီး တဖတ် ၃စက်ခတ်ပြီး အိပ်ပါ။ ခတ်ခါစ မှာ နည်းနည်းတော့စပ်တယ်မနက်မိုးလင်ခါကြရင် မျက်ဝတ်တွေအပြည့်တွေရပါလိမ့်မယ် မကြောက်ပါနဲ့ဆက်ခတ်ပေးပါ။ညစဉ်ညစဉ် ခတ်ပေးပါ ၇ရက်ပြည့်အောင် ခတ်ရပါမယ်။ နောက် ၁၅ရှိရင် တပတ်ပြန်ခတ်ပေးပါ။ဒီလို (၇) ရက်ခတ်၊ (၁၅) ရက်နား၊ (၃) ပတ်ပြည့်ရင် မျက်စိဝေဒနာတွေ ကင်းဝေးသွားပြီး။ မျက်စိမှုန်၊ မျက်ခိုးထွက်၊ မျက်မှန်တပ်ရသူ၊ မျက်မှန်လွတ်ပါသည် နောက် အများကြီး သိသာပျောက်ကင်းသက်သာပါလိမ့်မယ်။ နည်းဆုံး ၅ပွင့်လောက်ဆိုရပါတယ်။ ယုံကြည်မှအသုံးပြုပါ အမေ့ သမီးငယ်လေး Unicode ညစဉျ ဝလေေးရဲ့ မကျြစဉျး အကောငျးစားတကယျအစှမျးထကျတဲ့ … Read more
← Previous Page1 … Page1,130 Page1,131 Page1,132 … Page1,136 Next →